ara-dalàna taona hanaovana filokana ao pennsylvania
lalaon-teny vakio ny poker tanana 5 taratasy
lalaon-teny vakio ny poker tsatòka 4 taratasy
"Ny NCSL dia mino fa ny governemanta federaly dia tokony hanaja ny Departemantan'ny Fitsarana didim-pitsarana ary mety hanohitra ny ezaka rehetra amin'ny Kongresy ny preempt fanjakana fahefana Aterineto ny lalao," dia nanoratra hoe Hawaii-Panjakana Sen tsara indrindra tsy misy petra-bola casino tombontsoa. Greg Wren, mpiara-ny seza ny NCSL ny Fifandraisana, Asa ara-Bola & Interstate Varotra Komity ara-dalàna taona hanaovana filokana ao ohio.
Ny Fihaonambe Nasionaly-Panjakana mpanao lalàna, nilaza ny fikambanana ny hatry ny ela ny mpanohitra ny "olon-dratsy federaly mialoha emption-panjakana ny fahefany." Ny mpanao lalàna nanontany ny Kongresy mba hamela panjakana solombavambahoaka ny manapa-kevitra raha hanaiky ny Aterineto lalao fandraisana andraikitra ao amin'ny faritra ara-dalàna taona hanaovana filokana ao pa. Ny taratasy nosoratany ho an'ny Demokraty sy Repoblikana, ny mpitarika ny tany na ny Trano sy ny antenimieran-Doholona, anisan'izany ny antenimieran-Doholona maro An'isa Mpitarika Harry Reid, D-Nev ara-dalàna taona hanaovana filokana ao pennsylvania.
Carol Fukunaga, ary Alabama Rep lalaon-teny vakio ny poker tanana 5 taratasy. c.-monina Amerikana Lalao Fikambanana, manohana federaly-droa online poker. lalaon-teny vakio ny poker tsatòka 4 taratasy.